ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖန်တီး၍ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးကို နိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ပွားစေရန် တရားဝင် လှုံ့ဆော်သူနှစ်ဦး | Ko Rohingya
This entry was posted on April 5, 2013, in စိန်ခေါ်မှုများ, ချေမှုန်းခြင်း, ဆောင်းပါး and tagged ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, ဘုန်းကြီး, မုသားဝါဒီ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သမိုင်းလိမ်, သီတဂူ, ဦးအောင်ကြည်, မြန်မာ, မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ စာပို့ရန်